Jesosy ny voankazo voalohany - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2018-02 > Jesosy no voalohany
Eto amin'ity fiainana ity dia mitarika ny loza mety henjehina isika noho i Kristy. Mamoy ny harena sy ny fifaliana vetivety eto amin'ity tontolo ity isika. Raha efa azontsika daholo io fiainana io, nahoana isika no hiala amin'ny zavatra iray? Raha mahafoy ny zava-drehetra izahay amin'ity hafatra iray ity izay tsy ho marina akory, dia hoesoana tokoa isika.
Milaza amintsika ny filazantsara fa manana fanantenana hanana fiainana ho avy ao amin'i Kristy isika satria miankina amin'ny fitsanganan'i Jesôsy. Ny Paska dia fampahatsiahivana fa niverina Jesosy - ary nampanantena antsika Izy fa hiaina indray. Raha tsy nitsangana izy, dia tsy hanana fanantenana amin'ity fiainana ity na ho avy. Na izany aza dia efa nitsangana tokoa Jesosy, ka manana fanantenana isika.
Nanamafy ny vaovao tsara i Paoly hoe: “Efa nitsangana tamin’ny maty i Kristy! Izy no voalohany natsangan’Andriamanitra. Ny fitsanganany tamin’ny maty dia manome antoka fa hitsangana amin’ny maty koa izay maty nino an’i Jesosy.”1. Korintiana 15,20 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Tany Israely fahiny, ny voa voalohany nojinjaina isan-taona dia notapahina tsara sy natolotra ho fanompoana an’Andriamanitra. Tamin'izay ihany no azo nohanina ny ambin'ireo voa (Levitikosy 3: 23-10). Rehefa nanolotra amboara voaloham-bokatra ho an'i Jesosy ho an'Andriamanitra izy ireo, dia takatr'izy ireo fa ny voam-bary rehetra dia fanomezana avy tamin'Andriamanitra. Ny fanomezana lahimatoa dia naneho ny fijinjana manontolo.
Niantso an’i Jesosy ho voaloham-bokatra i Paoly sady nilaza fa i Jesosy no teny fikasan’Andriamanitra momba ny fijinjana lehibe kokoa izay mbola ho avy. Izy no voalohany nitsangana tamin’ny maty, ary izany koa dia maneho ireo hatsangana amin’ny maty. Miankina amin’ny fitsanganany amin’ny maty ny hoavintsika. Manaraka Azy isika, tsy amin’ny fijaliany ihany fa amin’ny voninahiny koa (Romana 8,17).
Tsy mahita antsika toy ny olona mitoka-monina i Paul - mihevitra antsika ho anisan'ireo vondrona iray izy. Antokona inona? Moa ve isika ho olona manaraka an'i Adama na izay manaraka an'i Jesosy?
“Tamin’ny alalan’ny olona iray no nahatongavan’ny fahafatesana”, hoy i Paoly. Toy izany koa, “ny fitsanganan’ny maty koa dia avy amin’ny alalan’ny olona.1. Korintiana 15,21-22). Adama no voaloham-pahafatesana; Jesosy no voaloham-bokatra tamin’ny fitsanganana amin’ny maty. Rehefa ao amin’i Adama isika dia mizara ny fahafatesany aminy. Rehefa ao amin’i Kristy isika, dia mizara aminy ny fitsanganany amin’ny maty sy ny fiainana mandrakizay.
Ny filazantsara dia milaza fa ny mino an'i Kristy rehetra dia velona. Tsy tombontsoa vonjimaika fotsiny izany eto amin’ity fiainana ity – hifaly amin’izany mandrakizay isika. “Samy misolo tena: Kristy no santatra, rehefa afaka izany, rehefa ho avy Izy, dia izay Azy” (Isa.1. Korintiana 15,23). Tahaka ny nitsanganan’i Jesosy avy tao am-pasana, dia toy izany koa no hitsanganana amin’ny maty ho amin’ny fiainana vaovao sy tsaratsara kokoa. Mihoby izahay! Nitsangana i Kristy ary miaraka aminy isika!